Cycloramic v2.1 for iPhone – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)
Published On: Sat, Mar 16th, 2013 iOS application များ | By သက်နိုင်စိုး Cycloramic v2.1 for iPhone
iTunes Store ရဲ့ 2012 ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးတီထွင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ iPhone application လေးဖြစ်ပါတယ်။ iPhone 5/4S/4 သုံးမျိုးလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းလေးကိုစားပွဲပေါ်မှာထောင်ထားပြီး ဒီဆော့ဝဲလေးထဲက “Go” ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက စားပွဲပေါ်မှာထောင်လျက်လေး 360 ဒီဂရီလှည့်ပြီး ဗီဒီယို/ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမှာပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရော / Video ရိုက်ဖို့ရောနှစ်မျိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ Vibrate တုန်ပြီး စားပွဲပေါ်မှာထောင်လျက်လေးလည်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမှာပါ။ MyanmarMobileApp မှာ Cycloramic နောက်ဆုံး version တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့တီထွင်မှုဆုရရှိထားတဲ့ iPhone application လေး “Cycloramic” ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Mirror Download link: Download Cycloramic v2.1 for iPhone 5/4S/4
7 comments on “Cycloramic v2.1 for iPhone”	ကောင်လေး on March 16, 2013 at 3:38 pm said:
လိုင်းကောင်းတဲ့ သယ်ရင်းတွေ အနော့ကို တခြားဆိုက်မှာ တင်ပေးလို့ရမား……ဒီဘက်မှာ ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေလို့ …….. Please . တောက်ရမ်း စမ်းကြည့်ချင်နေပီ Reply ↓	nyan myo min on March 16, 2013 at 3:51 pm said:
mirror ကနေfileတွေကိုမတင်ပါနဲ့ဗျာmozilla firefox ကိုupdate တောင်းနေတယ်updateပေးလိုက်တော့firefox ကမြန်မာစာကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
Reply ↓	ကောင်လေး on March 16, 2013 at 3:57 pm said:
http://www.solidfiles.com/d/f8974cd5b2/ ရသွားပီ Reply ↓	phyoezaw on March 16, 2013 at 5:57 pm said:
Reply ↓	Nya on March 17, 2013 at 5:12 am said:
Reply ↓	arthet on March 23, 2013 at 3:28 pm said:
Android ဖုန်းတွေမှာ လေးထောင့်စပ်စပ်နဲ့ Iphone လို ထောင်လို့ရမယ့်ဖုန်းကို မမြင်ဖူးသေးဘူးဗျ
Reply ↓	ဝေယံဘုန်းနိုင် on March 24, 2013 at 2:27 pm said:
tablet အသုံးပြုနည်းလေးကို ကျေးဇူးပြုပြီး အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။